Banky amin'izao fotoana izao ny tantara - ny fomba hamaha ny vola efa nodimandry
Banky amin’izao fotoana izao ny tantara — ny fomba hamaha ny vola efa nodimandry
Rehefa ny olon-tiantsika iray, mandalo ny fiainana tsaratsara kokoa, ny kaonty, ary mipetraka aminy amin ‘ny anaran’ ny carte andrim-panjakana dia voasakana avy ny vaovao mikasika ny fahafatesana. Fa amin’izany fomba izany, dia azo atao ny mamoha azy ireo, ary, amin’ny tsara ny mpandova hanangona ny vola izay mitondra ny lohateny hoe. Ny banky dia miroso amin ny andian-tsoratra ny fitandremana, izay ho tonga»ny farany»ao amin ny fotoana izay dia nanolotra ny taratasy fanamarinana ny fahafatesana (alaina any amin’ny Kaominina). Amin’izay fotoana izay, na izany aza, dia tsy ho afaka ny ho»hamaha»amin’ny vola mandra-hanaiky ny carte andrim-panjakana sy ny antontan-taratasy ny antontan-taratasy izay hamela anao mba akaiky ny fomba fanao amin’ny banky, navoakan’ny-pirenena ny vola Miditra amin’ny sampan-draharaha ara-fahefana, tao anatin’ny izay mety ho inferred mazava ny an-tsipiriany ny entana sy ny nanambara ny lanjany (izay dia, mazava ho azy, eo koa ny kaonty banky). Tsy ny rehetra ireo banky manaraka ny lalana malama rehefa miezaka izy ireo mba handinika tsara ny fampiharana ny nifandimby. Manaraka ho azy fa raha lenders sasany mety ny mangataka ny asa ny fahalalana ao anaty fonosana ny antontan-taratasy dia tsy maintsy hita ao mba hamaha ny vola. Ny hafa mety hanorim-ponenana ho an’ny fanambarana amin’ny solon’ny affidavit.
ho an’ny daholobe ny asa atao alohan’ny Notary (notarial teni-vavolombelona ihany), na eo anatrehan’ny ny mpivarotra ny Fitsarana (fanambarana avy amin’ny fitsarana). Ity roa subscripts dia avy any ivelany ny nifandimby, mihevitra ny andraikitry ny taratasy fanamarinana ny fanajana ny devolution ny lovany. Ankoatra ny fanambarana ny tsy fandraisana anjara amin’ny subscripts ny nifandimby, ary ny nerlandey mazava eto ny raikipohy ny fianianana, ny taratasy fanamarinana dia ahitana ny daty sy ny toerana ny fahafatesana, ny angon-drakitra manokana, mametraka ny farany domicile raiki-tampisaka sy ny toeram-ponenana, sy ny. Amin’ny tranga izay dia tsy misy ny fanekena, ny lisitry ny mpandova ara-dalàna, amin’ny feno tsipiriany manokana, ny fanambarana dia tsy maintsy ahitana ihany koa ny antsipirihany ny famoahana ity tahirin-kevitra ity, ny lisitry ny olona izay atao hoe maha-mpandova ao amin’ny testamenta, ny lisitry ny mpandova ara-dalàna ao amin’ny hetsika fa ny testator tsy hodi-kazo, ny toe-tsaina rehetra ny fananany, ny mety ho fisian’ny voatery mpandova, dia tsy nieritreritra ao amin’ny testamenta, dia ilay fanambarana fa ny farany dia sy ny testamenta fitondrana nifandimby dia lasa manan-kery sy manohitra izany dia tsy nanome ny antso. Ny teni-vavolombelona ihany koa dia tsy maintsy midika fa misy ny antoko hafa izay manana zo ny lovany, hafa noho ireo voalaza etsy ambony, fa ny mpandova manana ny fahaiza-manao asa ary avy eo sy ny mpiray sisa velona dia tsy maintsy niditra an-tsehatra ao amin’ny res judicata fanapahan-kevitry ny fisarahan’ny ny anjara-raharaha na ny fitsarana ny fisaraham-panambadiana na ny fampitsaharana an-trano vokatry ny fanambadiana, na ny fandravana ny firaisana, ary teo aminy nisy ny famerana ny alalan’ny fanambadiana fananana fitondrana ny dia nanao fanambarana ary nanao sonia izany koa liana.
Eto dia manamarina ny zava-misy mikasika ny devolution ny lovany
Ny famandrihana dia authenticated mifandimby ny clerk ny Fitsaràna na amin’ny alalan’ny notary-bahoaka, na an-tanàna mpiasa, na tanàna hafa ofisialy tendren’ny Ben’ny tanàna. Izany dia ahitana ny toro-lalana mazava ho an’ny vaomieran’ny asa. Ho fampahalalana bebe kokoa, na ho fanohanana ara-dalàna eo amin’io lafiny io, dia afaka mifandray aminay amin’ny fampiasana ny mety fizarana ny vavahadin-tserasera